လ၏ကလေးများ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres • ပုံမှန်မဟုတ်သော • သိပ္ပံ • ကုမ္ပဏီ လ၏ "ကလေးများ
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 25 သြဂုတ်လ 2019
နေရောင်ကို၎င်းတို့၏အဆိုးဆုံးရန်သူပါပဲ။ ရှားပါးမျိုးဗီဇရောဂါနှင့်အတူ Xeroderma pigmentosum လူနာ, သူတို့ကခရမ်းလွန်နှင့်အတူအားလုံးအဆက်အသွယ်ရှောင်ရပါမည်။ အဲဒီမှာအသက်တာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်၏နာကျင်မှုတွင်
ကလောင်းရဲ့ပြင်ပမှာ။ လိမ္မော်ရောင်ကောင်းကင်ပြာကိုသွန်းလောင်းနှင့် Montluel အတွက်သြဂုတ်လအလယ်၌တည်ရှိသောမခံခဲ့ရလျှင်သော Auvergne-Rhône-Alpes ဒေသတွင်း၌သေးငယ်တဲ့မြို့, အပူပိုင်းဒေသဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ကြောင်းတစ်ဦးကနွေရာသီမိုးနဲ့နွေးအဆီ ။ ဒါဟာချ, ထိုနေ့ရက်သည် 19 နာရီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနေသော်လည်း, dosimeter နေဆဲမြင့်မားသောခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်။ အရိပ်ထဲတွင်နေ့ကိုသုံးစွဲသောနောဧ, diode emitting မီးခွက်အောက်မှာ, သူ့ဦးထုပ်ညှိ။ အလေ့အကျင့်များခြောက်နှစ်ပြီးနောက်, မိန်းကလေးကအမြဲပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်ကြပါဘူး။ လက်ကသူ့ဦးခေါင်းကိုလှုပ်လှုပ်ရွရွနောက်ကွယ်မှနေစဉ်သူ၏မျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်း Anti-ခရမ်းလွန်ဖန်, သူ့မျက်မှန်ခေါက်။ တစ်ခုကအရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုကူညီပေးဖို့သူ့ကိုမေးတယ်။ ကျဆင်းမှု၏ 10 နှစ်ပေါင်းအဆိုပါမိန်းကလေးတစ်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး, "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ထိုအနည်းငယ် askew ဖွစျကွောငျး့ပစ္စည်းပစ္စယပါပဲ။ ဒါဟာ fixed ရဲ့! ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထဲမှာ "အဆိုပါ" အရာ "ဟုပန်ကာအောင်မြင်သောတဲ့ပူဖောင်း-shaped ဒိုင်းလွှားနှင့်လည်ပင်း၏နောက်ကျောနှစ်ခုဘက်ထရီများအတွက်တည်နေရာမှာအာကာသယာဉ်မှူးငြင်းဆန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သောသံခမောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောဧသည်နေဆဲအဝတ်အစားများနှင့်လက်အိတ်နှစ်ခုအလွှာသယ်ဆောင်။ အားလုံး snug ။ ဒီရယ်စရာဝတ်စုံဖြင့်ကာကွယ်ထားသူမကမိုးရွာအတွက်ပြင်ပမှာ run ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်ကောင်းကင်သို့တက်ထုပ် Cross-အတော်များများကမျက်စိနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလက်တို့သည်ထိုင်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
Amin လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထပ်တလဲလဲမျက်စိနှင့်အတူဖောင်းသူ့မျက်စိ, နေရောင်ခြည်၏နည်းနည်းလေးရောင်ခြည်မှာမျက်နှာမပျက်
နောဧသည် xeroderma pigmentosum (XP ကို), ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်အတူအားလုံးအဆက်အသွယ်၎င်း၏သားကောင်များဥစ္စာကိုဖြုန်းသောဤမိဘမဲ့ရောဂါခံစားနေရပြီးလေးတွေ designates တဲ့ "ကလေးကလ၏" ပျော့တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သကဲ့သို့ Amin ။ နောဧသည်အပြင်သူရယ်တတ်ခြင်းနှင့်လက်ကသူ့ဦးထုပ်ပူဖောင်းနောက်ကွယ်မှ drifts ။ မိမိအပါးပျဉ်းမှချည်ထားသောပန်ကာနေသော်လည်းကောင်လေးကခြမ်းအပေါ်သူ၏မျက်နှာဖုံးရုတ်သိမ်းရေးအချို့လေကြောင်းရယူရန်ကြိုးစား။ တားမြစ်ထားသောမူအရတစ်ဦးကတုံ့ပြန်မှု action ကို။ "ကျနော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်ဟာမစ်, သူ့ဖခင်ကပြောပါတယ်။ Amin တခါတရံနေရောင်လောင်ကျွမ်းကြောင်းမေ့လျော့။ "Amin သာ9နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရူး၏အသက်အရွယ်ထားပြီးမွန်း၏အသင်းအဖွဲ့ကလေးများကစီစဉ်နည်းနည်းအထူးဒီအားလပ်ရက်စခန်း၏သားသမီးများ၏ကိုး * ဘို့ကဲ့သို့သူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ ။ သူသည်အနာရောဂါရောဂါအခါအီဒီအာမင်4နှစ်ရှိပြီရှိခဲ့ပါတယ်။ သာ "သို့မဟုတ်" ပြီးသား "4 နှစ်ကလေးအထူးကုအကြားအလင်းနှင့်ညှိနှိုင်းထိတွေ့၏အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အကူအညီမဲ့ dermatos" သင်ဤသို့ပြောနိုင်သည် "သူ၏ဖခင်ကပြောပါတယ်။ Amin လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့မျက်စိ, ထပ်တလဲလဲမျက်စိနှင့်အတူရောင်ရမ်း, တင်းတိပ်နှင့်အတူ riddled နည်းနည်းလေးနေရောင်ခြည်၏ရောင်ခြည်, သူ၏မျက်နှာမှာမျက်နှာမပျက်။ အဆိုပါဆရာဝန်များရုံနေရောင်ကာကွယ်ဆေးများနှင့်နေကာမျက်မှန်သူ့ကိုထားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါဆေးရုံမှ Necker မှာဆရာဝန်တစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါပေါ်ပေါက်ရှိရာမေလ 2014 အတွက်ထိုနေ့ရက်သည်အချိန်အထိ:" သင့်ကလေးမဟုတ်တော့လငျးကိုမွငျသငျ့သညျ။ "
သတ်မရှိလုပ်ပိုင်, Ana,3နှစ် Geese ပညာပေးလယ်ယာ Bonnefamille (Isère) တွေ့ရှိ။ © Alvaro Canovas / ပဲရစ်ပွဲစဉ်
အဆိုပါစျေးမှာရက်ရက်စက်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဆေးရုံထဲကသူ့ကိုယ်သူတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီကမိသားစုတစ်ခုသာမန်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးများနှင့်ရုတ်တရက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုအနာဂတ်မှာများ၏မြင်ကွင်းကို obstructing နှင့်အတူအချို့သောအကြံပေးချက်များတပ်ဆင်ထား, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, ယခုအချိန်တွင်အောက်မေ့: တစ်ဘဝကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်း ယခုပြုလုပ်မိမိတို့ကလေးတစ်ဥယျာဉ်တော်သို့ပြေးကဲ့သို့ပုရိုးရှင်းတဲ့အပျော်အပါးမှအကာအကွယ်မဲ့ရယူနိုငျသောညဥ့်အခါဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာနေရောင်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်သာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်အလင်းရင်းမြစ်အတုအလင်းအိမ်ပါဝင်သည်ခရမ်းလွန်ထုတ်လုပ်။ ထိုနေ့တွင်ပင်ကကားပြတင်းပေါက်များဖုံးလွှမ်းပြောင်းလဲမှုအိမ်မှာအလင်းရောင်, filter များကိုဝယ်ရမယ်, မီးသီး, လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ကုလားကာ LED ။ နှင့်အညီ, အားလုံးအထက်တွင်ရုံက၎င်း၏ဝက်ဝံဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသောကလေးသည်စိတ်ချ။ Wafa Chaabi, နောဧ၏မယ်တော်က, အသင်းအဖွဲ့လ၏ကလေးများ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ "တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုကျရောက်သောအခါ, အသင်းအဖွဲ့ကျော်ယူလည်းရှိ၏: သူမကထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်စေသောခံစားမှုပထမဦးဆုံးအကြိမ်သိတယ်။ ငါပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတှေ့အကွုံအကြှနျုပျ၏အနှစ်နှင့်အတူရောက်လာ။ မီ, မိသားစုများတစ်ဦးတည်းဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးနှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး shod တစ်ပါးပျဉ်းတဝိုက်ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်, ပြီးတော့ထည်များနှင့်ဖုံးလွှမ်း။ အခြားသူများကိုရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်ပိတ်မှောင်မိုက်၌နထေိုငျလာတယျ။ ဒီနေ့ပိုကောင်း honed ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ရှုထောင့်မှမိဘများသင်ပေးတယ်။ "ဟုအဆိုပါဦးစီးဌာနတို့ကငှားရမ်းထားသောကျေးလက်နေအိမျတျော၌, မိဘများနှင့်ကလေးများ XP ကိုပြင်သစ်တစ်ပါတ် Offbeat ရစ်သမ်အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေ: ဒီနေရာမှာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတွင်ကန်အသံသောနေဝင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းကြီးမားသောအသိုင်းအဝုိင်းအဆောက်အဦဂရုတစိုက် caulked ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စတေနာ့ဝနျထမျးအစည်းအရုံးပစ္စည်းကိုမို၏ကီလို, filter များ, ကုလားကာနှင့်ပိုပြီးခရမ်းလွန် dosimeters နှင့်အတူရက်အနည်းငယ်အစောပိုင်းကရောက်လာတယ်။ Objective: ကြမ်းပြင်လိုင်းများပေါ် တင်. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါတီများအရှုံးခံခရမ်းလွန်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုစတုရန်းစင်တီမီတာကိုဖုံးလွှမ်းရန်တံခါးဖွင့်ထားကြသောအခါ, dormers အပေါ်သတိပေးချက်လက္ခဏာနှင့်အမှိုက်သရိုက်အိတ်၏တိပ်ခွေများစွာ install ထက်မပိုပါဘူး ။
Saulsaie (Ain), အ9သြဂုတ်လပန်းခြံဧရိယာထဲမှာ။ ကလေးများတစ်အသားအရေမီလီမီတာရှာဖွေတွေ့ရှိရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အတော်များများကမျက်မှန်ဝတ်ဆင်။ ဒီရောဂါမျက်စိရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည်။ © Alvaro Canovas / ပဲရစ်ပွဲစဉ်
မနီးမဝေးအဝင်ဝကနေ့ Olympus, 10 နှစ်ပေါင်းသည်ရေနေ Center မှာညဉ့်အဘို့စတင် signal ကိုစောင့်ဆိုင်း။ ဒါဟာမကြာခင်မှာ 19 30 ညနေ; ပြင်ပမှာ, ကျယ်ပြန့်မိုဃ်းလင်းနေတုန်းပဲရှိသေး၏။ ထို့နောက်ထွက်ခွာမှီ, ပြီးသားခေါင်းထိပ်မှသည်ခြေဖုံးလွှမ်း့ Olympus, အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသည်သူ၏အကာအကွယ်ဝတ်စုံအပေါ်တတ်၏။ ထိုသို့သောအကွယ်အကာ။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်တယ်, ငယ်မိန်းကလေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသိတယ်။ ဒါဟာသူ့မိခင်, Emily Giret ၏ပဏာမခြေလှမ်းမှာ, သားသမီးများ၏ရာပေါင်းများစွာ၏ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသွားပြီသောကျော်ကြားသောသံခမောက်လုံးကို set up ခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်, Poitiers တက္ကသိုလ်မှအားကစားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဒီဆရာမတစ်ဦးရှေ့ပြေးပုံစံ Anti-ခရမ်းလွန်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်မြူ, ကျိုး, စံနမူနာပုံစံဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ "မသန်စွမ်းအားကစား" ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသုံးချထားပါတယ် ။ "အလွန်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုခရီးသွားလာနေစဉ်ငါတို့သားသမီးဖုံးလွှမ်းရန်တည်ရှိလျှင်မရသူတို့တစ်တွေနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးထားသည့်အပေါ်နာဆာကတီထွင်အဖြူရောင်အထည်, ။ သူတို့ကလုံးဝ antisocial ခဲ့သရဲတစ္ဆေများကဲ့သို့ကြည့်ရှုကြ၏။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအဆင့်နှေးကွေးခဲ့, နှင့်ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများလက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးနှစ်ကြာကို ယူ. "ဟုသူမကပြောပါတယ်။ 2014 အတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း, ထိုသံခမောက်လုံးယခုကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဗီယင်နာတွင်ထုတ်လုပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ filter များ, projector ကိုနှင့် dosimeter နှင့်အတူမော်ရိုကိုမှအားလပ်ရက်သွား
အပြင်ဘက်မှာနေရောင်ကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းတွင်စတင်; ဘတ်စ်ကားမကြာမီအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လက်၌ Dosimeter အချို့မိဘများယာဉ်စစ်ဆေးပါ။ ပြတင်းပေါက်အထူကုလားကာဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲအနည်းငယ်ခရမ်းလွန်အရွက်: အဲဒီမှာဖြေရှင်းမှတဦးတည်းနောက်ဆုံးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအမှိုက်သရိုက်အိတ်ပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါရေအောက်သတ္တဝါများအလယ်ဗဟိုသူအကြီးအခရမ်းလွန်ပြတင်းပေါက်ရှိပါတယ်။ နေ့ကိုလုံးဝကျဆင်းသွားခင်နောက်ဆုံးတော့သုံးဖြုန်းနိုင်သူကလေးများ, တစ် Boon ။ ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကပြုလုပ်မြင်းသွားကြဖို့ 21 15 နာရီသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ တော၌အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲကစားရန်သာလရောင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ LED ပန်းကုံးများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Naima နှင့် Lakhdar ဖွငျ့ကြီးမားသောအစက်အပြောက်, ကျန်ကြွင်း။ သေးငယ်တဲ့ Delia ဟောင်း6နှစ်ပေါင်းအပါအဝင်ငါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရောဂါသားသမီးသုံးဦး၏မိဘတို့, သူတို့က - များစွာသောအခြားမိသားစုများနဲ့တူ - စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏စည်းစိမ်ကိုတပ်ဖြန့်နှင့်၎င်းတို့၏သမီးမရှိသရက်ရွက်အားလုံးသူတို့အစွမ်းသတ္တိရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခံစားချက်။ "ကျနော်တို့များကိုပေးစွမ်းလေဆိပ်လုံခြုံရေး၏ခေါင်းပေါ်သို့ဆက်သွယ်, ဒါဟာအားလုံးမျှော်လင့်ယူ ... လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများမှာ X-Ray မလွန်ပါဘူးအရာ filter များ, projector ကိုနှင့် dosimeter နှင့်အတူမော်ရိုကိုမှအားလပ်ရက်သွား ဆရာဝန်၏စကားလုံး Naima ကပြောပါတယ်။ ခရီးသွားဝေးနေတဲ့ပဟေဠိဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်နှလုံးမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမခြေအောက်၌သဲ၏အာရုံခံစားမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့သည်ကမ်းခြေပေါ်, သမုဒ္ဒရာ၏အစွန်းယူချင်ခဲ့တယ် Delia သူမကကထိသူမကဆားငန်ရေ၏အရသာကိုသိတယ်။ ကျနော်တို့လိုက်မီးထိုး installed ကျနော်တို့လငျး၌ရှိကြ၏စိတ်ကူး။ အိမ်မှာကတူညီတဲ့င်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးဘောလုံးအားကစားကွင်းနှင့်တူထ lit နေပါသည်! ညဥ့်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲ, သူမပန်းပွင့်ရဲ့အနံ့ကိုရှူရှိုက်, ပုရွက်ဆိတ်တွေနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်, မြေမထိ, သူ့ပါးပေါ်လေတိုက်ခံစားရတယ်, မြက်ပင်များတွင်လှိမ့်နိုင်ပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါမွန်း၏ကလေးများမှတပါး, အသက်တာ၏သေးငယ်တဲ့အမှုအရာအောင်ပွဲသွားရှိသည်။
ဤရွေ့ကားခမောက်ကသူတို့အပြုံးများဝှက်မထားကြဘူး။ သူတို့ 1 000 ယူရိုတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကိုကုန်ကျ Poitiers တက္ကသိုလ်ကနေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ © Alvaro Canovas / ပဲရစ်ပွဲစဉ်
ကိုလိုနီစဉ်အတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်အတူစည်းရုံးနေကြပါတယ်။ Alain Taieb, ဘော်ဒိုးတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှအရေပြားရောဂါဗေဒပါမောက္ခသူတို့ကိုဆီးကြိုဖို့ခရီးစဉ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသောအခါ "လို့သူကပြောပါတယ်, ကျနော်တို့ပုံမှန်သက်တမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာရနိုင်သည်။ ယခုမူကားများအတွက်, ကပျောက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ "နှစ်ဦးညီအစ်ကိုတို့, သောမတ်စ်နှင့်ဗင်းဆင့်စီးရီး, xeroderma pigmentosum နှင့်အတူပထမဦးဆုံးလူနာအပြည့်အဝခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏မိဘများ, ထိုအသင်းအဖွဲ့လ၏ကလေးများ၏တည်ထောင်သူ, 1990 နှစ်ပေါင်း၏အဆုံးကိုဦးတည်, သူတို့ကို 10 သို့မဟုတ် 15 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်တစ်ခုမလွှဲမရှောင်မကုန်မီပုံမှန်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြကုန်အံ့သူတို့ကိုအကြံပေးတဲ့သူဆရာဝန်တွေရဲ့သေဆုံးမှုကိုငြင်းပယ်ကြပါပြီ ။ သောမတ်စ်နှင့်ဗင်းဆင့်သည်ယနေ့ 26 ။ သူတို့ကလူပျို၏သူတို့ဘဝ, ဝေးခရမ်းလွန်လေမှလေ့လာမှုများနှင့်ခဲကိုလိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကျဆင်းသေးအပြည့်အဝမိဘများစိတ်ချဖို့အပြည့်အဝလုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ် Amin ဖေကသူ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုဝန်ခံနှင့်ပြောင်းရွေ့ပါကနောက်ဆုံးတွင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏စိုးရိမ်မှုတွေ calms သူကိုမိမိသားကိုမိမိကိုမိမိခဲ့ဝန်ခံသည်။ Amin သူဟာမိုးရေထဲမှာခုန်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူကသေချာသည်: နောက်ပိုင်းမှာသူအာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည်။
အရင်းအမြစ်: https: //www.parismatch.com/Actu/Societe/Les-enfants-de-la-lune-1643301
Garoua:3နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့်ရက်စက်စွာအသတ်ခံ
ကျောက်တောင်အပျက်အစီးဂြိုဟ်သိမ် Ryugu ၏မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထားကမ္ဘာမြေပုံနဲ့တူတဲ့အတူသင်တို့မျက်စိစားသောက် - BGR